Irma, duufaanta cusub ee weyn ee kusii jeedda Kariibiyaanka | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Duufaannada, Saadaasha hawada
Kaliya markii qof waliba wali haysto tan cawaaqibka ay reebeen duufaantii Harvey markay marayso Texas, duufaan cusub, oo lagu baabtiisay magaca Irma, waxay kusii jeeddaa Caribbean-ka. Iyadoo ay suurtagal tahay in sidoo kale la gaaro Mareykanka, waxaa iska leh duufaannada caanka ah ee loo yaqaan "Cape Verde hurricane".
Noocyadaan duufaannada ah ayaa loogu magac daray maxaa yeelay waxay ka samaysan yihiin cirifka bari ee Badweynta Atlantik, meel u dhow jasiiradaha Cape Verde. Ka gudubka Atlantic, Cape Verde duufaanno waxay u muuqdaan inay u istaagaan inay noqdaan qaar ka mid ah duufaannada ugu waaweyn uguna daran. Tusaalooyinka tan waxaa laga heli karaa Hurricane Hugo, oo gaartay qeybta 5, oo saameyn ku yeelatay Puerto Rico, Saint Croix iyo South Carolina, oo ka tagtay dhaawac weyn 1989. Tusaale kale waa Hurricane Iván 2004 tii qeybta 5, oo leh Xoog aan horay loo arag “oo ku yaal latitude hoose oo dabeylaha ugu badan ay gaarayaan 275km / saacaddii.
1 Irma waa duufaan halakeyn karta
2 Puerto Rico ayaa diyaarinaysa
3 Ayaa sheegta duufaannada?
Irma waa duufaan halakeyn karta
Hurricane Irma hadda
Irma ayaa loo magacaabay duufaan kuleyl ah subaxnimadan Arbacada. Galabnimadii Khamiista, waxay horey u ahayd duufaan Nooca 3 ah, oo leh dabaylo 185km / saacaddii. Xoojinta qarxintan waxaa loo yaqaan "deg deg deg ah.", sida lagu qeexay Xarunta Duufaanta Qaranka. Magacan waxaa loo bixiyaa marka uu kordho xawaaraha dabaysha ugu yaraan 56km / saacaddii wax ka yar 24 saacadood.
Xaaladda Harvey, waxaan arki karnaa isla dhacdadan. Waxay yeelatay koror deg deg ah kahor intaysan dhulka gaarin, oo uqaaday qeybta 4 markii ay udhaqaaqday agagaarka Corpus Christi. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo la saadaalin karo inay sii xoogeysan karto, in yar ayaa oran lahayd waxay gaari doontaa xoog sidan u weyn ka hor, markii la filaayay inay gaari karto qeybta 1, ugu badnaan 2. Mararka qaarkood, daqiiqadaha ugu dambeeya arrimaha ayaa sababa is-beddello waaweyn , labadaba duufaannada iyo dhacdooyinka kale ee saadaasha hawada.
Wixii Irma, saadaasha hadda iyo rasmiga ah ee Xarunta Duufaanta Qaranka waxay muujineysaa taas way sii xoogaysan doontaa markaad u dhaqaaqdo galbeedka shanta maalmood ee soo socda. Aad ayey suurtogal u tahay in Talaadadan, ay horey u noqon doonto duufaan heerka 4-aad ah. Qeybtaan, marka loo eego miisaanka Saffir-Simpson, waxay ka kooban tahay xawaaraha dabaysha ee u dhexeysa 210 iyo 249km / saacaddii, iyadoo leh cadaadis dhexe oo u dhexeeya 920 iyo 944 millibars. Burburka suuragalka ah wuxuu ku baahsan yahay dhismayaasha difaaca, burburka saqafka hoose ee dhismayaasha yaryar, iyo daadadka dhulka berriga ah, sida Harvey.
Saadaasha Irma maalinta Khamiista ee xigta 7
Puerto Rico ayaa diyaarinaysa
In kasta oo aysan suurtagal ahayn in si sax ah loo ogaado haddii duufaanta Irma ay gaari doonto Puerto Rico, degmada jasiiradda ee Culebra horay ayey u diyaar garoobeysaa, iyadoo u maleyneysa inay dhici doonto. Duqa magaalada Williams Iván Solís ayaa yiri, “Ma is aamini karno. Waxaan dadka ka codsaneynaa inay is diyaariyaan. Yaanan sugin ilaa daqiiqada ugu dambeysa ». Duqa magaalada ayaa sidoo kale tilmaamaya in hadii duufaantu ugu danbeyn saameyn ku yeelato Puerto Rico, meelaha ay ku yaalaan alwaax iyo guryaha zinc, iyo waliba guryaha guurguura, waa laga saari doonaa.
Iyadoo la tixgelinayo saadaasha Xarunta Duufaanta Qaranka, Irma waxay mari kartaa waqooyiga Puerto Rico inta u dhexeysa Arbacada iyo Khamiista ee usbuuca soo socda oo ah "duufaan weyn." Iyadoo leh dabaylo ka weyn 178km / saacaddii hore waxay ahaan lahayd qaybta 3. "Si aysan musiibo u dhicin, waxaan isku diyaarinaynaa sidii aan sannad walba isugu diyaarin jirnay", Solís ayaa lagu xukumay
Ayaa sheegta duufaannada?
Sannad kasta liis ayaa loo diyaariyaa iyadoo ay la socdaan magacyada duufaannada dhaca xilli-xilliyeedku ay heli doonaan. Liisaskan oo soo noqnoqda 6dii sanoba mar, waxaa ku jira magac xaraf kasta oo alifbeetada ah (oo aan la tirin xarfaha Q, U, X, Y iyo Z) iyo magacyo lab iyo dheddig oo kale. Sannadkan tusaale ahaan, xilligii duufaanku wuxuu ka bilaabmay Arlene, bishii Abriil, isagoo ku bilaabay magaca A. Harvey, oo ahaa H, warqadda xigta waxay noqon doontaa aniga, markaa Irma ayaa ku xigta.
Markay duufaan si gaar ah wax u waddo waddan, magaceeda waa laga noqdaa oo lagu beddelaa liiska. Sidoo kale magacaaga lama isticmaali karo 10ka sano ee soo socda si looga fogaado jahwareer. Sidan oo kale, adoo ku magacaabaya duufaan magac ah, si dhakhso leh ayaa si fudud loogu heli karaa waqtiga. Nidaamkan waxaa abuuray 1953 Xarunta Duufaanta Qaranka, ee Mareykanka.
Waxaan soo wargelin doonnaa wax kasta oo dhacdooyin ah ee ku saabsan horumarka Irma.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Irma, duufaanta cusub ee weyn ee kusii jeedda Kariibiyaanka